के गर्देछन मोेदीका नेपाली धर्मपुत्र जितबहादुर सारु मगर ! | रिपोर्टर्स नेपाल रिपोर्टर्स नेपाल
के गर्देछन मोेदीका नेपाली धर्मपुत्र जितबहादुर सारु मगर !
प्रकाशित मिति :6August, 2018
काठमाडौं, २१ साउन । चार बर्षअघि पहिलो पटक नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालमा चर्चा पाएका थिए। उनको राजनितिक जिवन र नेपाली धर्म पुत्रको रुपमा उनले सार्वजनिक गरेका नवलपरासीका जितबहादुर सारु मगरको समाचारले त झनै नेपाली उनि प्रति दयालु बनेका थिए ।
नेपाल भ्रमण गर्नु पुर्व मोदीले ट्विट गरेका थिए ‘व्यक्तिगत रुपमा मेरो नेपाल भ्रमण एकदमै विशेष छ। धेरै वर्षअघि मैले एउटा नेपाली बालक भेटेको थिएँ, जितबहादुरलाई आफू कहाँ पुगेँ भन्ने थाहा थिएन ।’
जितबहादुरलाई घर छाड्न आउँदा मोदीको चर्चा राम्रैसँग भएको थियो । उनि नेपाल पुग्नु पुर्व नै उनको परिवारलाई ब्यवस्थाका साथमा नेपालस्थित भारतीय दुतावासले काठमाडौँ स्थित होटल हायातमा राखेको थियो । त्यो बेला भारतीय दुतावासले जीतबहादुरकी आमा खगिसरा, दाइ दशरथ र भाउजू तथा जितबहादुरकी बहिनी प्रेमकुमारीलाई काठमाडौँ बोलाएको थियो । भारतीय वायु सेनाको विशेष विमानमा आफूसँगै जितबहादुरलाई पनि लिएर आएका मोदी काठमाडौं आएका थिए ।
खुसीको कुरा, हामीले जितबहादुरको परिवारलाई पत्ता लगाउन सफल भयौँ। मलाई खुसी लागेको छ, भोलि जितबहादुरको परिवारले छोरासँग भेट गर्नेछ। मोदीले गरेको यो ट्विट नेपाल बाट मात्र नभएर उनका विश्वभरी रहेका प्रसंशकहरुले यो ट्विटमा लाखौ प्रतिक्रिया जनाएका थिए । तर अहिले के गर्देछन त राना ? किन उनि गुुमनाम जस्तै रहेका छन आज भोली ?
त्यसपछि मोदी दुई पटक नेपाल भ्रमणसहित संघीय राज्य भएपछि केही महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा आए । जितबहादुर न मोदीलाई भेट्न आए, न मोदीले जितबहादुरलाई सम्झिए ।
मोदीले जितबहादुरकी आमा र परिवारका सबै सदस्यलाई पहिलो पटक आउँदा भेटेका थिए । मोदीले जितबहादुरकी आमा खगिसरलाई त्यसबेला भनेका थिए,‘मैले तपाईंको छोरालाई बडो माया गरेर हुर्काएँ, राम्रो कलेजमा पढाउँदै छु । अब तपाईंको जिम्मा लगाउन चाहन्छु ।’
काठमाडौं उत्रनेबित्तिकै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफूलाई बसोबासको व्यवस्था गरिएको होटल हायात पुगेर सबभन्दा पहिले जितबहादुरका परिवारजनलाई भेटेका थिए । प्रधानमन्त्री मोदी र छोरा जितबहादुरलाई भेट्नेबित्तिकै खगिसरा एकक्षण भावुक बनेकी थिइन् ।
मोदीले आफ्नो धर्मपुत्र जीतबहादुरका बुबाआमाको खोजी गरेका थिए । जितबहादुरको खुट्टामा भएका छ औँलाका कारण यो सम्भव भएको थियो। त्यो बेला हिन्दुस्तान टाइम्सका संवाददाता उत्पल पराशर र प्रशान्त झाले लेखेका थिए ।
जितबहादुरका आफन्तहरूका अनुसार उनी भारतमै छन् ।अहिले जितबहादुर मोदी परिवारको हिस्सा बनेका छन्। उनले अहमदावादको लक्ष्मण ज्ञानपीठबाट स्कुल तहको अध्ययन सकेर त्यहाँकै राइ विश्वविद्यालयमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका छन्। मोदी प्रधानमन्त्री बनेर नयाँ दिल्ली सरेपछि जीतबहादुर होस्टलमा बस्न थालेका थिए ।
जितबहादुरले घरपरिवारसँग कहिलेकाहीँ सम्पर्क गर्दै आएका छन् ।
आलमलाई बचाउन जाँदा
काठमाडौँ, ४ मंसिर । निलम्बित सांसद आफ्ताव आलमको बहसको सिलसिला चलिरहँदा दुई जना वकिल बीच
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा सवारी साधन रोक्ने महानगरको प्रयास असफल
काठमाडौँ, ४ मंसिर। ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक सम्पदा वसन्तपुर–हनुमानढोका दरबार क्षेत्रको खुला पार्किङ तथा सवारी आवागमन
सामाजिक सुरक्षामा उद्योगीको अझै आनाकानी
काठमाडौँ, ४ मंसिर । चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि लागु हुने गरी सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको सामाजिक
नेपाली भूमिमा मन्दिर बनाउन रोक
काठमाडौँ, ४ मंसिर । कञ्चनपुर पुनर्वास नगरपालिका–४ आनन्द बजारनजिक खोलामा स्थानीयलाई आवतजावतमा समस्या थियो। स्थानीयको
सूचना प्रवाहलाई सहज बनाउने थापाको प्रतिबद्धता
काठमाडौँ, ४ मंसिर। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका नवनियुक्त प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले सूचना प्रवाहलाई सहज
नेपालमा चैत १५ बाट युरो–६ पेट्रोल बिक्री हुने
काठमाडौँ, मंसिर ४ । नेपालमा आगामी चैत्रदेखि युरो–६ मापदण्डको पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गरिने भएको छ
आलमको भिडियो सार्वजनिक भएपछि प्रहरी तनावमा
काठमाडौं, ४ मंसिर । तीनवटा मुद्दामा पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएका निलम्वित सांसद मो।आफ्ताव आलम
उत्तरकोरियालीको भिसा म्याद थपमा अमेरिकी आपत्ति
काठमाडौं, ४ मंसिर । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावविपरीत नेपालले १७ जना उत्तरकोरियालीको भिसा